လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်မော်ကွန်းတိုက် - Tele RELAY တစ်ခု
Florence Foresti သည် Cesar ၏“ ရွံရှာဖွယ်ရာ” ကို Roman Polanski အားပေးခဲ့သည်
Roman Polanski အားပေးအပ်သောအကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ချက်စာလုံးသည်မလွန်ပါ။ Adèle Haenel ချက်ခြင်းအခန်းမှထွက်ခွာသွားချိန်တွင် "အရှက်ရ" ဟူသောကြွေးကြော်သံဖြစ်သည့် Florence Foresti သည်ညနေခင်းအခမ်းအနားများ၏မြှောင်မထားခဲ့သူ…
တော်ဝင်ဒေါသ - မိဖုရားဟယ်ရီအား Meghan Row အတွက်“ ရှားပါးသောအဝတ်အစား” ကိုပေးခဲ့သည်
var brightcoveBrandsafety = '4 အားကစားနှင့်အထူးကုသတင်း - ကြော်ငြာကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းအတွက်အောင်မြင်ခဲ့သည်' ဟယ်ရီ၏တော်ဝင်အကြီးအကဲရာထူးမှနုတ်ထွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသည်နှင့်သူ၏အဖွားနှင့်ဆက်ဆံရေးတင်းမာလိမ့်မည်။ အဆိုပါစုံတွဲသည်မပျော်ဟန်ရှိသည်။
Samuel Eto'o သည်နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ၏စူပါလင်းယုန်ကြီးများအားအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ကမ္ဘာ့အဆင့်အမြင့်ဆုံး | အားကစား
L'icône du football africain Samuel Eto’o pense que le talent du Nigéria est égal à celui de l'Argentine, de la France et du Brésil.Eto’o, actuellement à Lagos pour promouvoir la compétition Castle's 5s Football…
Couple royal: comment le «couplage unique» du prince Harry et Meghan Marklealaissé entendre à la…
var brightcoveBrandsafety='4 Sport and specialist news – passed for ad targeting' Le prince Harry et Meghan Markle sont devenus duc et duchesse de Sussex lors de leur mariage en mai 2018. Depuis lors, le coupleaaccueilli un…
Céline Dion canalise Carmen Sandiego chic dans un look rouge et jaune audacieux lors d'une…
Céline Dion canalise Carmen Sandiego chic alors qu'elle porte un look rouge et jaune audacieux lors d'une sortie à New YorkPar Glenn Garner pour Dailymail.com Publié: 06:44 GMT, 29 février 2020 | Mis à…
Chiomoma ကို Davido က“ ငါမင်းကိုထပ်ပြီးကိုယ်ဝန်ရလာမယ်” လို့ပြောခဲ့တယ်။
Le chanteur nigérian Davidoarévélé son intention d’avoir plus d’enfants qu’il n’enaactuellement et pas avec une autre personne que sa petite amie Chioma.Davidoaécrit qu’il allait bientôt remettre Chioma enceinte parce qu’elle est…
မင်းသားဟယ်ရီကအကြောင်းကောင်းတစ်ခုအတွက်သီချင်းကိုတွန်းအားပေးသည်။ Duke of Sussex သည်လန်ဒန်ရှိ Abbey Road ၏စတူဒီယိုများသို့သွားခဲ့သည်။ Beatles, Pink Floyd နှင့် Oasis အုပ်စုများသည်အကြီးမားဆုံးကြယ်များကိုလက်ခံကျင်းပခြင်းကြောင့်လူသိများသည်။ အဆိုပါ ...
ထုတ်ဖော်: Meghan နှင့်ဟယ်ရီဝီလျံနှင့်ကိတ်ထက်ပို။ လူကြိုက်များနေသောတစ်ခုတည်းသောareaရိယာ
var brightcoveBrandsafety = '2 စိတ်ပျက်စရာသတင်း - ကြော်ငြာကို ဦး တည်သည်' သို့သော်တော် ၀ င်ဇနီးမောင်နှံသည်လူကြိုက်များရေးကိစ္စများတွင်အထွreme်အမြတ်ထားဆဲ,ရိယာတစ်ခုရှိသည်။ လက်ရှိလူကြိုက်အများဆုံးဝီလျံအားရိုက်နှက်ခြင်းပင်…
Un assistant de Donald Trumpadéclaré que les médias couvraient le coronavirus pour « faire tomber…
န်ထမ်းများ၏အိမ်ဖြူတော်ရဲ့သရုပ်ဆောင်အကြီးအကဲ Mick Mulvaney, အ coronavirus အဖုံး Trump ကိုပျက်စီးစေရန်ချဲ့ကားပြောဆိုခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ (ပုံ: Getty Images) မီဒီယာများကချဲ့ကားပြောဆိုမှုများဆိုသော Donald Trump ၏လက်ထောက်များ
Lady Gaga ၏ဖခင်သည် Grand Central စားသောက်ဆိုင်အတွက်ငှားရမ်းခကိုငြင်းဆန်ခဲ့သည်
Le père de Lady Gaga refuse de payer le loyer de son restaurant et bar Grand Central Terminal, affirmant que la population sans-abri de la gare ferroviaire tue son entreprise. Joe Germanotta affirme que les sans-abri dans l'aire…
123 ... 413 လာမယ့်